Umthetho we-Cosmic of Attraction - Ukukhawulela
Unqulo & Umoya Ukuphilisa
Ukuqonda uMthetho woKhenketho
Mhlawumbi uyazi umntu omkhulu ekuboniseni. Kusenokwenzeka ukuba uye waziva enomona kumntu ngenxa yokuba kubonakala kunakho konke, kubonakala ngathi ufumana ezi zinto ngenzame encinane ngokungathi bazalwa phantsi kweenkwenkwezi zenkwenkwezi. Ewe, mhlawumbi bazalwa bekwazi ngolwazi lokubonakalisa lube luhle. Ndiyithetha oku ngenxa yokuba ndiyakholwa xa sifunda into ebomnye ubomi (Ewe, ndiyakholelwa ebomini obudlulileyo, iimeko ezifanayo) ayilahlekanga, kwaye sinokukhetha ukuzisa ezo talente njengethuba lokuya kumava obomi obutsha.
Njengeyiphi na isakhono esithile abantu abanalo, ukubonakalisa akufani nokudlala ipiyano okanye ukunyathela ama-pancakes emoyeni. Ukuhle kangakanani kuyo kuxhomekeka kwindlela osebenza ngayo ngokufanelekileyo. Kwaye, nangona abanye bethu bebhetele kwizakhono ezithile ezingathethi kuthi sonke, ngokuziqhelanisa, asikwazi ukuphucula okanye ukugqithisa i talente echazwe yenye. Abo bantu abaphumelelayo ekutsaleni baye baqeqesha iingqondo zabo ukuba bagxile kwiminqweno yabo. Baye bafunda kakuhle kangangokuthi amaxesha amaninzi abaqapheli ukuba bayakwenza njani. Ubuninzi buza kubo ngokwemvelo. Abayi kukhanyisa iso xa umntu ecetyiswa ukuba akafanelekanga into ethile, akuyiyo inxalenye yabo.
Ukuqonda ukuqonda kangcono indlela "uMthetho woKhenketho" osebenza ngayo inyathelo lokuqala lokuzisa ininzi ebomini bakho.
Siyakha yethu inyaniso. Sitsalisa ezo zinto ebomini bethu (imali, ubudlelwane, umsebenzi) esijolise kuzo.
Ndiyathanda ukuba ndikuxelele ukuba kulula njengoko kuchaza ukuqinisekiswa, kodwa akukho kuqinisekiswa kuya kusebenza ukuba iingcamango zakho okanye iimvakalelo zakho zilahla.
Xa sigxininisa ekubeni "nokuba nomncinci" ngoko sizenzele loo mava. Xa sigxininisa "Ndiyayinqanda umsebenzi wam" ke asiyi kuphinda siyiqaphele imiba yengqesho yethu eyanelisayo.
Ngokwenene, ukufuna nje into akuyi kuzisa oko xa siqhubeka sijonge ngokungabi nalowo nto. Konke esiza kuba namava "akunaye" kwaye kuya kuthi ekugqibeleni siyivimbele iiminqweno zethu zokwenyaniso.
Kulungele ukugxila kwinto ethile okanye imeko ngaphandle kokunqoba okanye imali.
Enye impazamo esenzayo kukuba siyakuthi sicinge ngobuninzi ngokwemali esinayo kwi-akhawunti yethu yasebhanki. Ndicinga ukuba ukugxininisa ekuqhubeni i-lottery kuyisiqhamo esingenaziqhamo. Ukugxininisa ekuphumeleleni i-lottery kufana nokugxila "ekungenayo." Ndiyathetha oku ngenxa yeengxoxo ezithile endiba nazo kunye nabanike le mnqweno, Babelane ngezinto abaza kwenza ngayo ngempumelelo xa bephumelele. Sekunjalo, ezinye zezinto abazithethayo zakuba nazo ngemali abanokwenza ngoku sele benayo ngemali yabo yangoku kwizinga elincinci, kodwa ayenjalo. Ngoba kutheni? Ngenxa yokuba banamathele kwizinto abazibonayo "njengengqolowa encinci" nesimo sengqondo sokuba abanalo ngokwaneleyo. Nasi umzekelo wale:
Unina womntu unayo imoto enesidingo sokulungiswa. Indodana ithi "Ukuba ndiwine iLotter ndithenga umama entsha imoto." Kodwa ngokwenene, unyana unendlela yokuthabatha imoto yakhe kumatshini kwaye ahlawule ama-$ 400 adingekayo ekulungiseni ukuqinisekisa ukuba umama wakhe unemoto ethembekileyo ukuqhuba umva kunye nokuya emakethi.
Xa ebuzwa ukuba kutheni engazange ahambe phambili kwaye enze ukuba imoto yakhe yangoku ilungiswe, uyaphendula, "Hamba, ndine-$ 800 kuphela ebhankini, kwaye ukwenza oko kuya kunqumla isiqingatha sam esithengayo. Kwenzeka ntoni ukuba imoto yam idinga ukulungiswa ngeveki ezayo okanye intombi yam igule kwaye idinga ukubona ugqirha? "
Ngoko uyabona, ukugxininiswa komntu okwenene "kungenako" kunokugxila ekuzuzeni iLotter. Xa sigxininise "engonelanelekanga" akusayi kuze kube yimalini ukuba sinayo imali eninzi, ayisoze yanele. Ukucetyiswa ukuba ukuhlawulela ukulungiswa kwemoto kamama kwazisa ukwesaba kwakhe evulekile. Kuya kuba mnandi ukuba umntu angathembela ukuba ngokuncedisa unina nokuhlawula ukulungiswa akayi kubeka ingozi yemali. Kodwa ngeli xesha, ngelixa evakalelwa kukuba kufuneka abambelele kwesoyiko lokwenene, ndiyakumcebisa ukuba lo mntu ugxininise ekuboniseni umama ukuqhuba ngokukhuselekileyo ukuya kunye nakwiimarike ekuthuthukisweni kwaye engakhange afumane nayiphi na indlela yokuphazamiseka kwemishini.
Oku kuya kuba ngumfanekiso omhle / ucinga ukufumana loo mfanekiso ube yinyani. Esinye isiphakamiso siza kuzisa uMthetho woKhenketho kumama wakhe ukuze aqale ukukhanga imoto entsha phakathi kwezinye izinto anokuzifuna.
1998 © Phylameana lila Désy
Ulunge Njani Kwizinto Ezikhangayo Kwizinto Eziphilayo?
Umthetho weMisebenzi yokuKhenketho kungakhathaliseki ukuba usebenza okanye awusebenzi. Ingxaki kukuba singakwazi ukukhanga izinto esizifunayo. Ukuze ukhange izinto ofuna zona kukugxila kwiimeko ezilungileyo kwaye "uzive ulungile." Ukuthatha uMthetho woKhenketho wokuKhenketwa kufuneka kukunikezele inkcazo ecacileyo ukuba ingaba zakho iingcamango neemvakalelo zisebenzela wena okanye malunga nawe.
uthathe imibuzo ngoku
Indlela yokwenza i-Holistic Health Kit
Indlela yokwenza iNkonzo entsha yeNyanga
Vumela I-Side Your Women Side to Flower - Amadoda Namabhinqa Bobabini!
Indlela ye-Ayurveda yokuSikwehla kwexesha lokuPhepha kweMvelo - I-Hormone yoTshintsho lwamaHlathi
Ukuphilisa okupheleleyo. Alternative Medicine
I-Totem yezilwanyana Igalari yezithombe: I-Totland Totems
Liyiphi iXesha elithi "Ukukhuphaza" kuthetha ntoni kwiMithi eSebenzi?
IiVithamini kunye neMaminerali ye-Skin-B Free-Skin Skin
AbakwaShamanic Sound Sound
Ukulwa nokungaziqondi kwe-Empathic Tendencies
Izivumelwano zomphefumlo kunye nokuCwangciswa koBomi ngaphambi kokuzalwa
Oko kuthetha ukuthintela i-Bet kwiGalofu
Ukusebenzisa i-verb yeSelver 'Creer'
ILizwe Lesithembiso eBhayibhileni
Indlela yokuLahla i-Algae yokuThabisa
Indlela yokwenza iLizwi lakho
Ukukhulisa umthi weKrisimesi yobuKristali
Izihlobo Zokulwa Neentlanzi - Ziziphi Iimbambano Ezixhomekeke Ngayo Ngempela? (2015)
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweZikolo ezizimeleyo kunye neZikolo ezizimeleyo?
Indlela i-Genetic Mutation eya kwi-White "Race"
Iibhayisiki ezili-10 ezihamba phambili
I-Lewis Acid Base Reaction Definition
Isingeniso kwiNkqubo yoLawulo lweVB.NET ngefa
Umzekelo Wezenzi zeVesi eza
Izinkohlakalo Ziyilunge ngakumbi Kunoko Ucinga
Ezinkulu zokuhlala eManzini
Abafazi abaLwazi abaGogo: iiNgxelo zeMbali zeLifa
Imiba ephezulu ye-Animal Rights Issues
I-Biography kaJohn Kerry
I-Social Dialect okanye i-Sociolect Inkcazo kunye nemizekelo
I-Elgin Marbles / Parthenon Sculptures
Uluhlu lweZibhalo zoLuntu lwaseJamani
Izinto Ezincinane Omele Uzazi Ngomdaniso we-Hip-Hop
Ukuqwalasela ingozi kunye neengozi zoPhando oluPhezulu
Imizobo yemiCango - Iisampuli ezimbalwa zoBugcisa bokuqala behlabathi
Iimviwo ZeeMathematika: Ukuxelela ixesha kwiiMzuzu ezili-10, imizuzu emihlanu kunye neNgcaciso enye